ကျနော့သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ Macbook Pro မှာ အရင်က Mac OS X ကို မသုံးတတ်လို့ windows7တင်ထားပါတယ်။ သုံးနှစ်လောက် windows7ကိုသုံးပြီး အခု Mac OS X ကိုပြန်လိုချင်လာလို့ Mac OS X ကိုပြန်တင်ဖို့…Continue Started this discussion. Last reply by Ko-AKM Jul 7. Window7Expanding windows files stuck at (0%)
Ko-AKM replied to Arakan Tinwin's discussion Installing OS X on windows7macbook pro"ဆိုင်ကဘာလို့ မရတာလဲပြောပါသလားတကယ်ကတော့ရကိုရ ရမှာပါမမြင်ရတော့လဲခက်သားကလား ရန်ကုန်ကပါလား..ရန်ကုန်ကဆိုရင်တော့ KMDဒါမှမဟုတ် access spectrumကိုပြကြည့်ပါရပါလိမ့်မယ်"Jul 7Arakan Tinwin postedadiscussionInstalling OS X on windows7macbook proကျနော့သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ Macbook Pro မှာ အရင်က Mac OS X ကို မသုံးတတ်လို့ windows7တင်ထားပါတယ်။ သုံးနှစ်လောက် windows7ကိုသုံးပြီး အခု Mac OS X ကိုပြန်လိုချင်လာလို့ Mac OS X ကိုပြန်တင်ဖို့ ဆိုင်ကိုသွားပို့တဲ့အခါ ဆိုင်က Mac OS X ကို တင်မရတော့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ တယောက်ယောက်များ သိမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အကြံပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ် ခင်ဗျား။See MoreJul51
Arakan Tinwin updated their profileApr 14, 2012Arakan Tinwin replied to Bruce Phyo's discussion ဇော်ဂျီ၊ windows7နှင့် အင်တာနက်....."or call me +66824242488"Apr 14, 2012Arakan Tinwin replied to Bruce Phyo's discussion ဇော်ဂျီ၊ windows7နှင့် အင်တာနက်....."enter internet explor- tool - internet option- font- zawgyi- ok-done."Apr 14, 2012Arakan Tinwin replied to Nyi Nyi Aung's discussion USB Debugging"Enter Setting-application-development-off usb debugging there."Apr 14, 2012 More... RSS